संगु Part2- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » संगु Part 2
संगु Part 2
बिहानको चार बजेतिर संगु बिउझिई र हातले छाती छाम्न थाली । ऊ निकै आश्चर्यित थिई, किनकी बेलुकासम्म लगाएको ब्रा उसको छातीमा थिएन । उसले केही बोल्न सकिरहेकी थिईन, मैले बातचित सुरु गरें “तलाईं अप्ठेरो भयो भनेर मैले खोलिदिएको छु ।“ अनि उसको हातमा ब्रा थमाईदिंए । उसले मलिन स्वरमा भनि “छि ! दादा, आफ्नै बहिनीको भित्री लुगा त्यसरी खोल्ने हो त ?” “तलाई याद छ, बच्चाबेलामा हामी कसरी नाङ्गै नुहाउँथ्यौ । बहिनीसँग पनि केको लाज !” “बच्चाबेलाको कुरो जस्तो हो त ? अब त म …… (ऊ अकमकिई)” “अब त के ?” “अब त म … ठूली भइसके नि ?” “त्यो त म देखिरा’छु नि ?” मैले बसको सिट-लाईट बालिदिएं अनि ऊ चुपचाप लागेर ब्रा आफ्नो ह्याण्डब्यागमा कोची । “भोक लागेको छैन ?” “भो ! म त केही खान्न ? बरु पानि पिउँछु ।“ मैले पानीको बोतल उसलाई दिएं उसले पानी पिउँदै गर्दा बसको कम्पनले पानी पोखिएर टि-शर्टमाथि पर्*यो र भिज्यो, जसकारण उसको पातलो टि-शर्टबात हल्का उसको भित्री अंग देखिन थाल्यो । मेरो आँखा अनवरत उसको छातीमा गडेको देखेर ऊ असमञ्जस भई र आफ्नो ध्यान झ्यालतिर पुर्*याई । उसको लाजले म रोमाञ्चित भएं ।
बिहानको साढे सात बजे बसले हामीलाई कोटेश्वर उतारिदियो । त्यसपछी हामी खासै ठूलो झोला नभएकोले पैदलै नरेफाँटतिर लाग्यौं । कोठामा पुगेपछी मैले ताला खोलेर र संगुलाई भित्र छिर्न ईशारा गरें । दुवैजना भित्र छिरेपछी मैले ढोकाको चुकुल लगाइदिए । संगु सशंकित नजरले ढोकामा हेर्न थाली अनि विस्तारै आँखा चारैतिर डुलाउन थाली । मेरो कोठा अथवा फ्ल्याट जे भनौं भित्र छिरेपछी कुनापट्टी किचन र सानो खाली ठाउँमा डाइनिङ अनि भित्रपट्टी एउटा कोठा थियो अनि त्यही कोठामा एटेच बाथरुम । किचनकै साइडमा पनि एउटा बाथरुम थियो । तर भित्रको बाथरुममा मोटो सिसाले चारैतिर बारेको अत्याधुनिक बाथटब कमड सहितको थियो भने ढोकाको सट्टामा पातलो अर्धपारदर्शी प्लाष्टिकको पर्दा थियो । भित्रपट्टी बत्ती बालेको बेलामा हल्का धमिलो आकृतिमा भित्र नुहाउनेको शरिर देखिन्थ्यो । बाथरुमभित्र लाईफसाईजको ऐना थियो भने बाहिर पट्टी पनि भित्तामा ठूलो लाईफसाईजकै ऐना थियो । भित्रको कोठामा ठूलो किङ्गसाईजको बेड र छेऊमा चाइनिज दराज थियो अनि एक साईडमा कुनापट्टी लेड टि.भी. र त्यसकै छेउमा कम्प्युटर टेबलमा ल्यापटप । भित्तामा ठूलो एउटा फ्रेम गरेको स्विजरल्याण्डको पोष्टर थियो । पहिलोपटक छिर्ने मान्छेले भित्री कोठालाई सानदार नै देख्थ्यो । मैले संगुको हात समाएर भित्रको कोठामा लगेर बेडमा बसाएं अनि आफू चाहीं तरकारी लिएर आँउछु भन्दै बाहिर निस्किएं । पसलबाट मैले बिस्कुट, दुध, सब्जी तरकारी, कुखुराको मासु एक किलो र एक फूल भोड्का र क्र्यानबेरी जुस आदी ल्याएर फ्रिजमा राखें । अनि भित्रको कोठामा छिरें । संगुले कपडा फेरेर बसेकी रहिछ, खाटभरी उसका कपडा यत्रतत्र छरिएका थिए । मैले भनें “कपडा दराजमा मिलाएर राख् न !” त्यसपछी फेरी किचनमा आएं र चिया पकाउन थालें । चिया तयार भएपछी म चिया हातमा लिएर भित्र छिरें र एउटा संगुको हातमा थमाएर भनें “रातभरी केही खाएकी छैनस् चिया र बिस्कुट खाई है त ?” संगु चिया पिउन थाली, म चाँही चिया कम्प्युटर टेबुलमा राखेर आफ्नो कपडा खोल्न थालें । टि-शर्ट, भेष्ट अनि पेन्ट खोलेर छेउमा राख्दै दराज खोलें र टावल निकालेर कमरमा बेरें अनि चिया पिउन थालें । संगु नजर लुकाउँदै कर्के आँखाले मेरो कमरतिर हेरिरहेकी थिई । चिया पिइसकेपछी म बाथरुम छिरेर नुहाउन थालें । नुहाइसकेर मैले कमरमुनि मात्र टावल बाँधेर निस्किएं, त्यसरी निस्कनको लागि मैले जानाजान लाँडो ठन्क्याएर टावल उठ्ने बनाएको थिएं ताकी संगुको ध्यान मेरो लाँडो भएनेर पुगोस् । अझ दायाँ-बायाँ हुँदा उसको नजरमा टावलको छेउबाट सक्दो लाँडोनै नजर आओस् । जब म बाथरुमबाट बाहिर निस्किएं, संगु बाथरुमको ढोकाको ठिक सामुन्ने थिई र उसको नजर सिधा मेरो कमरमुनि टावल उठेको ठाउँमा पर्*यो । संगुको अनुहारमा थोरै रातोपना चढ्यो, मैले त त्यही खोजेको थिएं । म सरासर उसको अगाडी पुगें अनि हल्कासंग टावलको चेपबाट लाँडो उसको आँखामा पर्नेगरि दराज भएतिर गएं । दराजबाट अण्डरवेयर निकालेर मैले त्यहीं टावल खोलेर नाङ्गै हुँदै लगाएं अनि ऐना हेर्दै दुई-तिन पटकसम्म हात छिराएर लाँडोलाई मिलाएँ । त्यसपछी पेन्ट र टि-शर्ट लगाएर टावल भुईंबाट उठाएर संगुलाई दिदैं भनें “जा ! फ्रेस भईहाल ! म तेतिञ्जेलसम्म खाना तयार गर्छु ।“ त्यसपछी म किचनतिर लागें । आधा घण्टा जस्तोमा संगु नुहाइवरी बाहिर निस्किई, उसको टाउकोमा रुमाल बाँधिएको थियो भने तल कालो लेगिन्स र माथि पिंक कलरको लुज टि-शर्ट लगाएकी साह्रै सेक्सी देखिएकी थिई । लेगिन्समा उसको पुतीको फाँका प्रष्टै छुट्टिन्थ्यो र उसले तल र माथि दुवै अन्तःवस्त्र लगाएकी छैन भन्ने पनि कपडाबाटै स्पष्ट हुन्थ्यो । “आज कसलाई ढाल्ने बिचार छ केटी, एकदम हट भएकी छेस् त !” “छि ! दादा पनि मैले के नै लगाएकी छु र ?” “त्यही त भन्या तैले के नै लगाएकी छेस् र ?” अनि चाकमा प्याट्ट पार्दै पुठ्ठालाई हत्केलाले समाएर भनें “अण्डरगार्मेन्ट्स किन नला’की त ?” संगु रातो-पिरो भई र “मैले घरबाट आउँदा ल्याउनै बिर्सेछु के !” भन्दै भित्री कोठामा छिरी । केहीबेरमा म पनि भित्री कोठामा छिरें र दराजबाट एउटा पोका निकालेर संगुलाई दिंदै भनें “यो लगाएर हेर त ! मिल्छ होला ?” (त्यो पोका एउटा साथीले मलाई गर्लफ्रेण्डलाई गिफ्ट दिनु भनेर दिएको थियो, एकदमै सेक्सी लिङ्गरी कलेक्सनको तिन चार जोडी ब्रा र पेन्टी त्यसमा थिए । तर गर्लफ्रेण्डलाई त्यसरी गिफ्ट दिने मौका नै मिलेको थिएन अझ भनौं गर्लफ्रेण्डलाई बेडसम्म ल्याउने वातावरण नै मिलेको थिएन ।) संगु त्यो पोका लिएर बाथरुम छिरी र लगाएर आई, मैले सोधें “मिल्यो त ?” “अँ….” उसले अरु कुनै प्रतिकृया दिईन ।
मैले संगुलाई सोधें “के छ त आजको प्लान ?” “केही पनि छैन, झन मलाई त केही पनि थाहा छैन ?” “ठिकै छ ! त्यसो भए म पहिला अफिस पुगेर आउँछु अनि त्यसपछी तलाई घुमाउन लैजाउँला !” खाना खाइवरी म अफिस जाने तरखरमा लागें, पत्रकारीताको काम विदा पछाडीको उपस्थिति जनाउ गरेर गर्मी महिनामा काठमाण्डुको सेरोफेरोमा पर्यटकिय चहलपहल विषय टिपाएर अफिसको मोटरसाइकल लिएर म नरेफाँट पुगें । म कोठामा पुग्दा संगु सुतिरहेकी थिई, एकछिन ईमेल चेक गर्न म ल्यापटप चलाउन थालें । ल्यापटप चलाउँदा चलाउँदै मलाई एउटा उपाय सुझ्यो, संगुलाई आफ्नो चंगुलमा पार्न केही ब्लु-फिल्म र सेक्सका कथाहरु डेस्कटपमै राखिदिने । ब्लु-फिल्म त मसँग धेरै नै थिएं अनि कथाहरुचाँही बेलाबखतमा साइटमा पढ्ने गर्दथें । मैले भएका केही ब्लु-फिल्म डेस्कटपमा फोल्डर बनाएर राखें अनि केही साइटबाट पारिवारिक चिकाइका केही कथाहरु पनि डाउनलोड गर्न थालें, मैले डाउनलोड गरेका कथाहरु विशेषतः बाबु-छोरी, दाजु-बहिनी, आमा-छोरा र अन्य नजिकी नाता सम्बन्धमा भएका यौन घट्नाका कथाहरु थिए । तिनलाई मैले छुट्टै फोल्डर बनाएर हाललाई गोप्य राखें ताकी उसले सजिलैसँग त्यो हेर्न नसकोस् । अनि सबै हिस्टरी डिलीट गरिदिएं जसले गर्दा मलाई थाहा होस् कि उसले के हेरी के हेरिन भन्ने । त्यति गरेर मैले ल्यापटप बन्द गरें अनि संगुतिर फर्किएं । सिराननेर उसको मोबाइल थियो, त्यो हेर्न थालें । वाफ रे उसको मोबाइलमा त कोठा दामी दामी अर्धनग्न सेल्फि फोटोहरु थिए, मन न हो मैले उसको सेल्फी फोटोहरु आफ्नो मोबाइलमा ट्रान्सफर गरें । त्यति गरेपछी मैले उसलाई उठाँए र भनें “ल रेडी भई अब घुम्न जाने ?” उसले आँखा मिच्दै भनि “कतिखेर आउनुभा’को ? मैले त थाहा नै पाईन ?” “अघिनै हो, आएर ईमेल चेक गरेर भ्याइसकें ?” त्यसपछी ऊ कपडा लिएर बाथरुम छिरी अनि छिनमै चेन्ज गरेर आई । वाफ रे संगुले ट्रान्सपेरेन्ट सेतो शर्ट र टाइट जिन्स लगाएकी थिई । शर्टबाट उसले लगाएको भित्री ब्रा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो भने पेन्टको कमर निकै तल थियो यदी उसले जाँठा नखौरेकी भए जाँठानै देखिन्थ्यो होला । त्यसमा उसले हाईहिल सेण्डल लगाई र भनि “ल जाम् !” त्यसपछी मैले दराजबाट केमरा निकालेर बाहिर निस्किएँ । मोटरसाईकल स्टार्ट गरेपछी ऊ मेरो पछाडी बसी अनि मैले मोटरसाईकल अगाडी बढाएं । गठ्ठाघर पुग्दा मोटरसाईकलमा संगु र मेरो बिचमा दुरी छ भन्ने महसुस भएपछी मैले घ्याच्च ब्रेक लगाएं । संगुको छाती पूर्णरुपमा मेरो ढाडमा टाँसियो अनि मैले पछाडी फर्केर भने “अलि टाँसिएर बस नत्र चलाउन गार्हो हुन्छ ।“ ऊ सहजै मानी वा संकोचपूर्ण रुपमा मानी तर मसँग टाँसिएर बसी । मैले बाईक नगरकोटतर्फ हुईकाँए । हिजो भर्खर मेरै हत्केलाले खेलाएको उसको पोका मेरो ढाडमा सिंगौरी खेलिरहेको थियो र यसको प्रतिफल मेरो कमरमुनि झल्किरहेको थियो ।नगरकोट पुगेपछी अलि एकान्त ठाँउ पारेर मैले बाइक रोकें र पाखाको डिलबाट संगुलाई काठमाण्डौको झलक देखाउँदै मुख्य मुख्य स्थलनिशानी चिनाइदिएं । विशाल काठमाण्डौको दृष्यले उसलाई रोमाञ्चक बनाएको थियो । केहि बेर डिलमा अन्य कुरा गर्दै बिताएपछी, मैले पिशाब लाग्यो भनेर संगुबाट थोरै टाढिएं र झाडीपट्टी तुर्क्याउन थालें । संगुको कल्पनाले मात्रै पनि मेरो लाँडो ठन्किरहेको थियो । मेरो लाँडोबाट निस्केको पिशाबको धारले शायदः उसको ध्यान तानिरहेको हुँदो हो उसको नजरमा लाँडो पार्न मैले पिशाब फेरेर निथार्दै संगुतिर फर्किएं र पेन्टभित्र लाँडो छिराएँ । संगुले असहज महसुस गरि, सहज महसुस गरोस् पनि कसरी ? तर जे होस् म उसलाई यस्ता कृयाकलापमा अभ्यस्त बनाउन चाहन्थे । त्यसपछी हामी नगरकोटको मेन टावरतिर पुग्यौं र घुमिवरी त्यहाँबाट फर्कियौं । घुम्ने क्रममा मैले त्यहाँ घुम्न आउने केहि व्यक्तिहरुको भनाई र केही फोटोहरु लिन भ्याएको थिएं । मेन टावरमा र अगाडी बसेको ठाउँमा पनि मैले संगुको र आफ्नो फोटो पनि खिचेको थिएं ।
फर्कदा एक ठाउँमा बाटोको छेउमा एउटा बाईक रोकेकै ठाउँमा मैले आफ्नो बाइक रोकें र एकछिन बसौं भनें । त्यस ठाउँबाट दृष्यावलोकन राम्रै देखिन्थ्यो । मैले चिप्स र सफ्ट-ड्रिङ्क निकालेर हामी मिलेर खाउँ भनें । खाँदै गर्दा तल झाडीनेर “नाईं नाईं नगर्ने के …” लगायत केही आवाज आउन थाल्यो । मैले संगुलाई त्यहाँ रोकाउनुको कारण पनि त्यही सुनाउनु थियो । दश मिनेटजस्तो पछि झाडीबाट केटा र केटी अस्तव्यस्त हालतमा कपडा मिलाउँदै माथि चढे । तिनीहरु हिंडेको केही छिन पछि मैले संगुलाई फोटो खिच्छु भनें । ऊ तयार भई अनि मैले पोज पोजमा उसको फोटो खिचिदिएं । फोटो खिच्दा खिच्दै मैले संगुलाई अलिक सेक्सी पारामा हाउभाउ बनाउन लगाएं, ऊ संकोच मान्दै मेरो सबै कुरा हुबहु मानिरहेकी थिई । मैले उसको शर्टलाई माथिको दुईवटा बटन खोलेर छाती एक्सपोज गर्न लगाएं त्यसो गर्दा उसको ब्राको केही भाग बाहिर झल्कन्थ्यो । जे जस्तो भएपनि केटीहरु फोटो खिच्न बढी लालायित हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा थियो । त्यही क्रममा मैले विस्तार विस्तार उसको शर्टको अरु बटन पनि खोलिदिएं र यसरी राम्रो फोटो आउँछ भन्दै उक्साए पनि । घरी चाक पछाडी पुट्ट पर्नेगरि घरि छातीको उभार स्पष्ट आउने गरि मैले संगुको निकै फोटोहरु लिएं, अनि मैले उसलाई पेन्टको बटननिर बुढी औंला छिराएर पनि फोटो लिएं । त्यही पोजमा मैले थोरै बुढी औंलाले पेन्टलाई तल धकेल्न लगाउँदै फोटो लिएर भनें “केटी ! तँ त मोडेल जस्तै पो देखिन्छेस् त ?” संगु मेरो त्यो भनाईमा मख्ख परि, मैले त्यसको फाइदा उठाउँदै उसका दुवै हत्केला चाकका पुठ्ठामा राखेर चाक पछाडी र छाती अगाडी उभ्रिने गरि तल्लो ओंठलाई दाँतले च्याप्न लगाएर फोटो लिदै भनें “यो त दामी आएको छ ।“ मलाई त उसलाई अझै उक्साउनु थियो, त्यसपछी मैले सिधै उसको पेन्टको बटन र जिपर खोलिदिएं, संगुको मुहारमा परिवर्तन आएपछी मैले “किन डराएकी… भरे फोटो हेरेपछी त दंग पर्छेस् ।“ भन्दै उसको पेन्टी देखिने गरि केही फोटो लिएं अनि आफैंले उसको जिपर र बटन लगाइदिएं, मलाई उसको शरिरको स्पर्श पनि जो गर्नुथियो । अनि शर्टको बटन पनि म आफैले लगाइदिएं । उसले सन्तोषको सास फेरेझैं गरि । त्यसपछि मैले पूनः अघि बसेकै ठाँउमा बसेर उसलाई सोधें “तेरो फोटो निकै राम्रो राम्रो आएको छ बेलुका कम्प्युटरमा हेरौंला ।
कुरै कुरामा मैले संगुलाई सोधें “के छ केटी, गाँउका केटाहरुले त तलाईं निकै लाईन मार्छन् त ? ब्वाईफ्रेण्ड बनाएकी छेस् कि छैनस् ?” “छ्या दाई पनि, म कहाँ त्यस्ती छु र ?” “त्यो त मान्छेको अनुहार हेरेर कहाँ थाहा हुन्छ र ? रोमान्स भनेको खुलेआम गर्ने चिज पनि त होइन नि ?” अचानक यस्तो प्रश्नले संगु अत्तालिई र रातो मुख बनाउँदै मौन बसी अनि विस्तारै भनि “साच्चै भनेको मलाई यस्तो केही पनि थाहा छैन… भएपनि कतिदिन लुकाउन सकिन्छ र कहिं कतैबाट थाहा भइहाल्छ नि ।“ मैले हल्का स्वरमा भनें “भनेपछी फ्रेस नै छेस् होईन त ?” “हजुर !” संगुले फेरी सुन्न खोजी “फ्रि नै छेस् भन्न खोजेको ?” ऊ केहि बोलिन । मैले उसले देख्ने गरि पेन्टको बाहिरबाटै लाँडोलाई मसलें र सान्त्वना दिएं अनि भनें “ल ! अब फर्किउँ ।“ त्यसपछी हामी त्यहाँबाट फर्कियौं । कोठामा पुग्नासाथ मैले कपडा उतार्न थालें, संगु मलाई हेरिरहेकी थिई मैले सहजताका साथ पेन्ट खोलें र अण्डरवेयरमा हात छिराएर लाँडोलाई मिलाएं अनि हाफ पेन्ट लगाएं । अनि म बेडमा पल्टिदै भनें “संगु ! तँ पनि चेन्ज गरेर फ्रेस भएर बस् ।“ संगु आफ्ना कपडा लिएर बाथरुम छिरी र चेन्ज गरेर आई । यतिखेर उसले हाफ पेन्ट र माथि स्लिवलेस टि-शर्ट लगाएकी थिई । मैले उसलाई पनि आइज एकछिन सुस्ताई भन्दै तानेर बेडमा पल्टाईदिएं । एकछिनपछी मैले उसलाई भनें “धेरै टाईट अण्डरगार्मेन्टस लगाउनु हुँदैन क्यान्सर हुन्छ, घर बस्दा त किन लगाउनु पर्*यो र ?” उसले कुनै प्रतिकृया जनाइन । मैले सुतेको जस्तो गरें ऊ मनमा केहि कुरा खेलाउँदै थिई, केहिबेरमै उसले हातलाई ढाडतिर पुर्*याई र ब्राको हुक खोली अनि विस्तारै ब्रा खोलेर बाहिर निकाली । त्यसो गर्दा उसको टि-शर्ट निकै माथि सोहोरिएर पोकामाथि थुप्रियो, त्यसमाथि उसले हात भित्र छिराएर आफ्नो पोकाको मुआयना लिई र दुई-तिन मिनेटसम्म पोका खेलाईरही । त्यसपछी ऊ निद्रामा लिन भई, म पनि निद्रामा मस्त भएं । बेलुकाको झण्डै साढे छ बज्न आँटेको थियो, म उठें र टि.भी. अन गरें र समाचार हेर्न थालें । टि.भी.को आवाजले संगु पनि उठी, सरासर बाथरुम गई र मुख धोएर मेरो छेउमा आएर बसी । मैले उसलाई हेरें उसका दुधका पोकाको निपल साह्रो जस्तो देखिएको थियो र मैले भनें “आखिरमा खोलिछेस् त हैन ?” “के ?” “ब्रा !” ऊ रातो भई “तलाई कति लाज लाग्छ है ?” संगु उत्साहित हुँदै भनि “लाग्दैन त ! एउटी जवान केटीलाई यस्ता कुराले !” “ओह…! तँ त जवान पो भइस् है … त्यो त हो तँ मस्त तरुनी देखिन्छेस् ।“ “छि दाई पनि ?”
संगुले “मलाई किचनमा कहाँ के छ भन्नु त खाना बनाउँछु ।“ भनेपछी मैले उसलाई किचनमा लगेर सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी गराएं अनि जानकारी गराउने क्रममा मैले उसका धेरै संवेदनशील अंगलाई छुने प्रयास पनि गरें । उसले किचनमा पकाउने काम गरिरहँदा मैले पछाडीबाट उसलाई अंगालोमा बेरें र भनें “के के पकाउँदै छे त मेरी प्यारी बैनीले !” अनि उसको चाकमा मेरो लाँडोको दबाव बनाएं । मेरो दुवै हात उसको कमरनिर थिए अनि मेरो सासले गर्दा उसको काननेर तातो अनुभुति गराइरहेको थियो । मैले विस्तारै हातलाई माथि सारें र पोकाभन्दा ठ्याक्कै मुनि कसें । उसले लामि सास फेरी, तलबाट मेरो लाँडो ठन्किएर उसको चाकमा छेड्न खोज्दैथियो । उसले मेरो लाँडो चाकमा अनुभव गरेपछाडी छुट्टीने कोशिस गरि, त्यो मौकाको फाइदा उठाउँदै मैले उसको छातीमा बाँधेको हातलाई अझै माथि सारें र पोकामा दबाव बढाएं । यो निकै रोमान्चक अनुभव भइरहेको थियो । मैले संगुको गालामा मुख जोडेर किस गरेङ अनि “आज खाना स्पेशल छ जस्तो छ ।“ भन्दै हातले उसको पोकामा अझै दबाब बनाएर माथि सारें । यतिखेर उसका पोका उचालिएर टि-शर्टबाट बाहिर निस्कन खोज्दै थिए । त्यसपछी मैले विस्तारै हातको बँधाइ छुट्याएर उसका पोकालाई पुरै समाएर मसल्दै उसलाई छोडें । संगु आफूलाई भिन्न महसुस गरिरहेकी थिई । मैले उसलाई छोडेर भित्री कोठामा छिर्ने प्रयत्न गर्दा मेरो ठन्केको लाँडोमा संगुको नजर गढिरहेको थियो । मेरो प्रयाशः सफल हुँदै गईरहेको थियो । खाना पकाएर सकेपछी संगु म टि.भी. हेरिरहेको ठाँउमा आई र बस्दै भनी “खाना पाक्यो ! अब के गर्ने ?” मैले संगुलाई सोधें “म त पहिला भोड्का खान्छु, तैले पनि चाख्छेस् ?” “नाई म त रक्सी खान्न ?” “तलाई कसले लाग्ने गरि खा भनेको छ र ? थोरै टेष्ट गर्छेस् कि भनेर पो सोधेको ? जा, फ्रिजमा भोड्का र क्र्यानबेरी जुस छ लिएर आईज अनि तँ जुस खा म भोड्का खान्छु ।“ ऊ निस्किई र आउँदा उसको हातमा ट्रेमाथि भोड्का, जुस, दुई वटा ग्लास र प्लेटमा मासु पनि थियो । मैले भोड्काको बोतल खोल्दै एउटा गिलासमा राखें र जुस खोल्दै दुवै ग्लासमा खन्याएं । विस्तारै भोड्का खाँदै म फिल्म हेरिरहेको थिए, हामी मौन थियौं । मेरो ग्लास रित्तीएपछी संगुले भनी “अरु राखौं दाई ?” “अँ हाल न !” भनें उसले मेरो ग्लासमा भोड्का राखिसकेपछि मैले भनें “चाख न तैले पनि ?” उसले सहजै आफ्नो ग्लासमा पनि भोड्का खन्याई र मैले त्यसमा जुस थपिदिएं । मेरो जुस थपाई यस्तो थियो कि उसलाई भोड्काको भन्दा जुसको स्वादले जितोस् । एक-दुई सिप लगाएपछी संगुले भनी “मिठो हुँदो रैछ त !” “नमिठो चिज पनि कसले खान्छ त ?” भन्दै मैले उसलाई आफ्नो अंगालोमा लिएर अठ्याउँदै आफूमा टासें । ख्यालख्यालमै संगुले तिन पेग भोड्का लगाई । त्यति खाँदा मलाई त लाग्छ भने संगु फिलीली भइसकेकी थिई र मेरो अंगालोमै थिई । मैले उसलाई टि.भी. स्क्रिनमै दिउँसो खिचेको उसको फोटो स्लाइड-सो लगाएँ । बिभिन्न गफ गर्दै जाँदा मैले भनें “तेरो फिगर त एकदम गजबको छ तर ?” “के तर ?” मैले उसको पोका समाएर भनें “तेरो बुब्स थोरै सानो छ, हल्का ठूलो भएको भए दामी देखिन्थ्यो !” “अब छ नै यस्तै त म के गरुं ?” मैले अर्को हात पनि लगेर अर्को पोका समाएर भनें “मैले भनेजस्तो गरिस् भने मैले खोजेजस्तै हुन्छ तेरो बुब्स !” “कसरी ?” त्यसपछी मैले पोका हल्का खेलाउँदै भनें “मसँग त्यसको उपाय छ ! तैलें मैले भनेझैं गर्नुपर्छ ? एकैदिनमा हुँदैन समय लाग्छ ! तर तैलें एउटा काम गर्नुपर्छ !” “के काम ?” “तैलें धेरै लाज मान्नुहुँदैन मेरो अगाडी तेरो छातीका सबै लुगा खोलेर गर्नुपर्छ… !” संगुले मुख खुम्च्याउने बाहेक अरु कुनै प्रतिकृया दिईन ।केहीबेरसम्म हामी मौन बसेपछी मैले संगुलाई भनें “ल हिँड अब खाना खाउँ ! बाँकी कुरा खाना खाएपछी गरौंला !” त्यसपछी हामी खाना खान थाल्यौं, खाँदै गर्दा मैले सोधें “तैले ब्लु-फिल्म हेरेकी छेस् ?” “कस्तो हुन्छ दाई ब्लु-फिल्म भनेको ? मलाई त थाहा भएन त ?” “ल त्यसोभए अहिले हेर्लिस् ? त्यसले तेरो लाज सरम अलि कम गराउँछ !!!” खाना खाइसकेपछी संगु भाँडा सफा गर्न पट्टी लागि म भित्र छिरेर ल्यापटप खोलेर ईमेल हेर्न पट्टी लागें । लगभग आधा घण्टामा संगु किचनको काम सकेर बेडरुममा आई र भनि “दादा ! बेड त एउटा मात्रै छ कसरी सुत्ने ?” “यत्रो ठूलो बेडमा अरु दुई-तिनजना पनि सुत्न मिल्छ नि ? अनि के तँ मसँग सुत्न हुँदैन र ?” “सुत्न त किन नहुनु तर पनि ?” “के मैले तँलाई खाइदिन्छु र ?” “के थाहा…?”
ऊ ब्लु-फिल्म थाहा छैन पनि भन्छे अनि एउटै बेडमा सँगै सुत्दा “खान्छु र ?” भन्दा ससंकित हुन्छे भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा भयो कि ऊ पनि केही हदसम्म मसँग नजिकिन चाहन्छे तर पनि हिन्दु समाजको रिती अनुसार सामाजिक मान्यता अनुसार धेरै कुरामा व्यवधान अनि व्यवहारले गर्दा यी कुराहरु वर्जित झैं थिए । अझै भन्दा हाम्रो समाजले परिवारभित्र अझ भनौं हाड-नाता वा तेह्र पुस्ताभित्र साथै गोत्र मिल्दासम्म विवाह नै वर्जित छ भने अरु कुरा सोच्ने पो कसरी होस् र ? तर म यी सबै मान्यताहरु छोडेर आफ्नै सहोदर बहिनीसँग सम्बन्ध अघि बढाउने कोशिसमा थिएं थाहा छैन संगुले यसलाई कसरी लिन्छे । यदी उसले ठूलै प्रतिवाद गरि भने त सामाजिक रुपमा म बदनाम हुने खतरा पनि थियो । तर पनि उसँगको करिबी पहिलो दिनमै मैले उसको मुखमा स्खलन भएको थिएं भनें उसको ब्रा खोलिदिएको कुरा उसलाई जानकारी पनि गराइसकेको थिएं त्यसको लगत्तै दोस्रो दिनमा मैले उसलाई निकै सेक्सी पोजमा अंगहरु खुल्ने गरि फोटो खिच्न भ्याएको थिएं भने भर्खरै मात्र उसलाई रक्सी पिलाएर खुलेआम ब्लु-फिल्मको कुरा गर्दै उसका पोका सानो भए भनेर समाएर खेलाई पनि सकेको थिएं । यस हिसाबले हेर्दा अझ अगाडी बढ्दा प्रतिवाद मात्र हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो अवस्थामा मैले जबरजस्ती गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्दै थिएं । मैले एउटा अर्को प्रयोग गर्ने सोच राखें र उसलाई भनें “केटी तेरो बुब्स कति ठूलो भयो भनेर थाहा पाउन फोटो खिचेर हेर्दा सजिलो होला ? फेरी तँ त मोडेल जस्तै देखिन्छेस् यसो सेक्सी सेक्सी पोजमा फोटो खिचेर हेरौं त ?” “फोटो त खिच्न हुन्थ्यो दादा कसैले देख्यो भने ?” “कसले देख्छ र यहाँ तँ र म मात्रै त छौं ! अनि अरुलाई किन देखाउन पर्*यो र ?” त्यसपछी मैले क्यामरा अन गरें र एक दुई स्न्याप लिई पनि हालें । त्यसपछी मैले उसको दुवै हातलाई पोकामाथि राखेर अठ्याउन लगाएं र फोटो खिचें । विस्तारै घरि चाक समाउन लगाउँदै त घरि टि-शर्टभित्र हात छिराएर पोका निचोर्न लगाउँदै पोज पोजमा फोटो खिचें । त्यसपछी उसलाई टि-शर्ट माथि सार्न लगाएर बुब्सको तल्लो भाग देखिने गरि क्लोजअप फोटो लिएं, बुब्समा टि-शर्टलाई क्रमैसँग माथि सार्न लगाउँदै पुरै बुब्स देखिने गरि पनि फोटो खिचें । संगु मेरो साथ दिईरहेकी थिए, मैले जे गर्न लगाउँछु त्यही गर्दै । मैले उसको बुब्समा हत्केलाले साइज बनाउँदै हात माथि सारेर टि-शर्ट खोलिदिदैं भनें “अब बुब्सको फोटो लिउँ… अलि मजाले बुब्स समाएर पोज दे है केटी…” संगुले बिभिन्न पोज दिई पोका समाएर, रक्सीको नशाले हो कि क्या हो ऊ सहजै मसँग फोटो खिचाउन तयार थिई ।म उसको छेउमा पुगेर उसको हाफ पेन्टको बटनमा उसको औंला छिराउन लगाएर भनें “अब यसरी..” उसले त्यसै गरि । त्यसपछि मैले उसलाई विस्तारै बटन खोल्नु भनेर लगातार फोटो खिच्दै गएं । उसले सहजैसँग बाँकि बटन पनि खोली, उसको पेन्टी देखिन थालेको थियो । मैले उसलाई हाफ पेन्ट खोल्न भन्दा उसले हल्कासँग तल सार्दै खोल्न थाली उसको यो पोज झनै राम्रो आएको थियो । पेन्ट घुँडामा पुर्*याउँदा उसको पोका हल्का तल लच्किएको सिन अति नै उत्तेजक थियो । अझै भन्नुपर्दा मेरो लाँडोले कुनै पनि बेला संगुको नाममा पिचकारी छोड्न तयार भइसकेको थियो । मैले एकछिन है भन्दै किचनबाट फेरी दुई पेग भोड्का बनाएर ल्याएँ अनि एउटा उसलाई दिदैं भनें “फोटो एकदम राम्रो राम्रो आइरहेको छ अब धेरै बेर लाग्दैन । यति गटक्क पार त ?“ संगुले घुटुक्कै पार्दै मुख बिगारी । त्यो पनि मैले खिच्न भ्याएं अनि संगुलाई पेन्टीको दुवै छेउमा दुई हातका बुढी औंला छिराउन लगाएं र विस्तारै पेन्टी पनि खोल्न भनें । उसले पेन्टी केहि तल सारेपछि मैले उसलाई रोकिन भने र पेन्टीभित्र एउटा हात छिराउन लगाएं त्यसपछि पेन्टीको पुतीनिरको एक साईडबाट औंलाले तान्न लगाएर पुती देखिने गरि फोटो लिएं । त्यसपछी उसलाई पेन्टी हाफ पेन्ट झैं उतार्न लगाएं । अब संगु पूर्ण रुमा नाङ्गिएकी थिई । मैले संगुलाई टावल बेर्न लगाएर बेडमा पल्टिन लगाएं अनि साइड साइडबाट पोज लिएर फोटो खिचें । संगु यतिखेर ब्लु-फिल्मको हिरोईन भन्दा कम देखिएकी थिइन, कम थियो त उसको पुतीमा लाँडो छिराउने हिरोको, त्यो पनि म रेडी अवस्थामा उसको हिरो बन्नलाई मौका बनाउँदै थिएं । संगुलाई टावल बेर्न लगाएर मैले उसलाई घोप्टो पार्दै चाकतिरबाट पुती देखिने गरि फोटो खिच्दै थिएं । बेडमा पनि तरह तरहको फोटो लिदैं उसलाई टावल खोल्न लगाएर फेरी नङ्ग्यांए र दुवै खुट्टा फट्याएर उसको पुतीभित्रको अवयव देखिने गरि फोटो लिएपछि मैले भनें “ल केटी आजलाई यति नै । बाँकी भोली फेरी अरु ड्रेसमा खिचौंला । अब तँ कपडा लगाई !” किन किन मलाई उसको शरीर आजै भोग नगरौं भन्ने मनमा लाग्यो । संगुले कपडा लगाई, उसले पातलो नाइटी लगाई जुन मैले उसलाई बिहान दिएको थिएं, त्यो नाइटीले उसलाई नाङ्गो भन्दा बढी सेक्सी दर्शाइरहेको थियो । मैले उसको नाइटीसहितको फोटो खिच्ने आशयका साथ भनें “पख ! पख ! यो नाइटीमा त तलाई झन गजबको तरुनी देखिदो रहेछ !” अनि फोटो खिच्न थालिहालें । घरि नाइटीको साइडबाट बुब्स बाहिर निकाल्दै त घरि नाइटी माथि सारेर पुती देखिने गरि मैले निकै फोटो लिएं । फोटो लिईसकेपछी उसको सामुन्ने पुगेर ओंठमा ओंठ जोडेर किस लिँदा संगु असमञ्जसमा परि तर मलाई किस गर्नमा साथ पनि दिईरही । किस गर्दागर्दै मैले उसको पोका हात लगेर मुसार्दै विस्तारै हातलाई तल सार्दै उसको पुतीसम्म पुगेर औंलाले उसको पुती चलाईदिएं र भनें “तँ जस्तै प्वाँट तरुनी चाहिएको छ मलाई !” उसले किन भन्नुभन्दा पनि “मै छु त किन चाहियो अर्कै ?” भनि । “तँ भएर मात्रै पुग्दैन क्या ?” उसको पुती रसाइसकेको थियो । मैले उसको पुतीको रस लागेको औंला उसको मुखमा घुसार्दै भनें “बन्छेस् त मेरो बेड पार्टनर ?” “एउटै बेडमा सुत्दैछौं त भइएन र बेड पार्टनर ?” मैले उसको हातलाई मेरो लाँडोमाथि राखिदिदै भनें “बेड पार्टनर भएपछि त सबै कुरा सेयर गर्नुपर्छ ।“ “के के सेयर गर्नुपर्छ भन्नुस् न गर्न मिल्ने जति म गरिहाल्छु नि ?” त्यसपछि मैले उसलाई बेडमा बसाउँदै भनें “ल ! आइज ब्लु-फिल्म हेरौं । अनि के-के सेयर गर्नुपर्छ म भनौंला नि ?“ र मैले टि.भी.मा पेन ड्राइव जोडेर एउटा बि ग्रेडको मुवि लगाएँ । संयोगले त्यो हिन्दी फिल्म पारिवारिक यौन सम्बन्धका कथामा आधारित नै थियो । एउटा केटोले आफ्नी दिदीलाई फकाइ फकाइ नङ्ग्याएर शरिरसँग खेल्दै सांकेतिक रुपमा चिकेको त्यो फिल्मले खासै संगुलाई प्रभाव गरेन कि जस्तो लाग्यो र मैले बिचमै अर्को फिल्म लगाउँदै भनें “यो त खासै गतिलो रै’नछ अर्को लगाउँछु है ।“ अर्को फिल्ममा बुबा-आमालाई गाडीमा बाइबाइ गरेपछी भाइ-बहिनी एकछिन दौडादौड गर्छन् र जिस्कदाँ जिस्कदै केटोले केटीको टि-शर्ट उचालेर बुब्स चुस्न थाल्छ र केटी केटोको कट्टुबाहिरबाट लाँडो समाएर खेलाइदिन्छे । चुस्ने र किस गर्ने क्रममै केटोले केटीलाई मात्र पेन्टीमा सिमित बनाउँछ र शरिरभरी चुम्माचाटी गर्दै पेन्टीमाथि पनि जिब्रो दौडाउँछ र विस्तारै पेन्टी साइडतिरबाट सारेर पुती चाट्न थाल्छ केटी आफ्ना बुब्स समाएर आनन्द लिदैं केटोलाई अझै तिब्ररुपमा त्यो काम गर्न प्रेरित गर्छे । निकैबेर केटोले पुती चाटेपछी उसले केटीलाई छोड्छ तर केटीले हत्त पत्त केटोको कट्टु खोलिदिदैं लाँडो समाएर छाला फर्काउँदै मुखभित्र हाल्छे र आइसक्रिमका भाँति चुस्न र चाट्न थाल्छे । मैले संगुतिर फर्किएर हेरें, ऊ एकटक लगाएर त्यो फिल्ममा मस्त थिई । मैले संगुलाई अँगाल्दै भनें “केटी कस्तो लाग्दैछ त ब्लु-फिल्म ?” “यस्तो फिल्म पनि बनाउँदा रैछन् है ? लाज पनि नलागेको कस्तो छ्या ।” “सबैले त गर्छन् नि ? खालि नजान्नेलाई सिकाउन र मनोरञ्जनको लागि बनाएको फिल्म हो नि ? जुनै फिल्ममा पनि कहानीमात्र हुन्छ केटा-केटी विहा गर्छन् र सुहागरातमा बत्ती निभाउँछन् त्यो बत्ती निभाएको के हो भन्ने कुराको जवाफ हो ब्लु-फिल्म !”संगु एकटकले ब्लु-फिल्ममा मस्त हुँदा मैले अंगालो मारेकै हालतमा उसका पोकामा स्पर्श बढाउन थालें । फिल्ममा केटा-केटी दुवै ६९ पोजिसनमा एकार्कालाई चुम्माचाटी गर्दै थिए । निकैबेरको चुम्माचाटी पछाडी केटीले पुती फट्याएर सोफामा बस्छे र केटोले लाँडो तेर्साउँदै केटीको पुतीमा छिराउँछ । केटी उत्कर्षित आवाजका साथ केटोलाई अझ जोडले चिक्न प्रेरित गर्छे । मैले कट्टु तल सारेर लाँडो बाहिर निकालेर खेलाउँदै भनें “केटी ! मेरो लाँडो ठन्किएर उत्ताउलो भा’को छ तेरो हातले खेलाइदे न !” अनि उसको हात मेरो लाँडोमाथि राखिदिएं, संगुले बिना कुनै संकोच मेरो लाँडो समाएर बसी । उसको हातले मेरो लाँडोलाई मुठ्ठीमा लिएर हल्कासंग दबाब दिदैं छोड्दै गरिरहेकी थिई, फिल्म हेर्दै जाँदा उसको हात मेरो लाँडोलाई तलमाथि गराउन तत्पर भयो । संगुले मेरो लाँडो खेलाइरहँदा लाँडोबाट हल्का चिपचिपे तरल पदार्थ निस्कन थाल्यो । मैले पनि आफ्नो एउटा हातलाई संगुको पुतीमा लगेर बिची औंलाले उसको पुतीको बाहिरी भाग चलाउन थालें । फिल्ममा केटोले केटीलाई कुकुर स्टाइलमा चिक्दै थियो त्यहीबेला मैले संगुको पुतीभित्र थोरै औंला छिराईदिए संगुको मुखबाट हल्का सित्कार निस्कियो “आऽऽऽ…हऽऽऽऽ…” । फिल्मका दाजु बहिनी भयंकरसँग चिकामारी गरिरहेका थिए, केटोले हल्का थकान महसुस गर्दै केटीको पुतीबाट लाँडो निकाल्यो र मुखमा चुम्बन गर्न थाल्यो केटीले पुरापुर केटालाई साथ दिदैं थुक साटी र झुकेर फेरी केटाको लाँडो चुस्न थाली । संगुको मुखबाट अनायासै निस्क्यो “छि ! कस्तो घिन नलागेको त्यो केटीलाई !!!” “के को घिन हो ? जब तँ पनि यस्तो खेलमा एक्सपर्ट हुन्छेस् अनि थाहा हुन्छ तँलाई ?” “दादा तपाईं पनि यस्तोमा भुल्नु भएर हो कि क्या हो घर त्यति जान मन नगर्ने ?” केटोले केटीको मुखमा भित्रसम्म पुरै लाँडो छिराउँदै दबाबमुलक मुख-चिकाई गरिरहेको थियो । वाक्क हुने अवस्थामा पुग्दा केटोले केटीको मुखबाट लाँडो निकाल्थ्यो र केटी मन्द मुस्कान छर्दै फेरी लाँडो चुस्न थाल्थी । “कसरी छिर्छ होला है मुखमा तेत्रो चिज ?” “तँ पनि ट्राई गर्छेस् मेरो लाँडो मुखमा छिराएर ? एक चोटी ट्राइ गर न त ?” अनि उसको टाउको समाएर मेरो लाँडोतिर पुर्*याइदिएं, संगुले सहजै मेरो लाँडो मुखमा छिराई र मैले उसको टाउकोमा दबाब दिएं, संगुले प्रतिकार गर्दागर्दै पनि मैले जबरजस्ती उसको मुखमा गलासम्म पुग्नेगरि लाँडो छिराइदिएं र निकालें । यो क्रम दुईतिन पटक दोहोर्*याए पछाडी मैले संगुलाई भनें “अब विस्तारै फिल्ममा झैं गरि हल्कासंग आइसक्रिम जसरी चुस्ने र चाट्ने गर त ? भोली विहा गरेर गएपछी मेरो ज्वाईको लाँडो चुस्न जान्नुपर्*यो नि ?” संगुले मेरो लाँडोको जरामा हत्केलाले समाती र टुप्पोलाई चाट्न थाली । “वाह ! केटी तैलें त मेरो लाँडो गजबसँग चुसिदिईस त ?” उसले मुहारमा मन्द मुस्कान छरी र मेरो लाँडोको सुपारी च्वाप्प मुखमा छिराई र चुसी अनि हल्कासँग दाँतले कुर-कुर पारी, यो त अत्यधिक रोमाञ्चक क्षण भयो मेरो लागि । संगुले मेरो लाँडो खेलाउँदै चुस्दै गरिरहेकी नै थिई, फिल्ममा केटोले केटीलाई पोज चेन्ज गरि गरि चिकिरहेको थियो, म संगुको पुतीमा औंलाले खेलिरहेको थिएं । फिल्ममा केटा र केटी दुवै चरम उत्कर्षमा पुगेपछी केटोले केटीको पुतीबाट लाँडो झिक्यो केटी घुँडा टेकेर मुख खोलेर हातले केटोको लाँडोको टुप्पो खेलाउन थाली र केटोकोले लाँडोले केटीको अनुहारभरि फुसीको पिचकारी छोड्यो, केटी केटाको बिर्य जति मुखभित्र छिरेको थियो निल्दै बाँकि औंलाले सोहोर्दै मुखभित्र हाल्दै थिई । मेरो लाँडोले पनि संगुको मुखमै पिचकारी छोड्यो, संगुको मुख मेरो फुसीले भरिभराउ भयो । मैले भनें “निल केटी निल ! मेरो फुसी चाखेर कस्तो लाग्यो भन् ?” “कस्तो भिन्नै स्वादको तमतम्याइलो हुँदो रै’छ !” बेलुकाको ११ बजिसकेकोले हामी दुवैजना नाङ्गैने सुत्यौं ।
brother and sister, erotic sex stories, erotic sex story, inscent story, sex story
संगु Part 1
Girlfriend lai afno lado dekhaudai nepali kta